Qodobka 1-aad: Barcelona 3-0 Man United: Lionel Messi labo gool uu dhaliyay iyo Coutinho gool kale uu raacsaday ayaa ka caawisay Barcelona inay 4-0 isku darka labada lugu wareega 8-aad ku reebaan Man United isakana xaadirayaan nus dhamaadka Champion-ka.
Qodobka 2-aad: Juventus 1-2 Ajax: De Roon iyo De Light ayaa wax kama jiraan kasoo qaadeen gookii Ronaldo uu Juve u dhaliyay waxayna Ajax Semi Final ugu gudubtay 3-2 isku darka labada lug wareegii 8-aad.
Qodobka 3-aad: Sir Alex Ferguson macalinkii hore Man United ayaa aaminsan in kooxda Liverpool xili cayaareedkan EPL hanan karto sidoo kalena United ku qasban tahay inay celiyaan kulanka Man City la cayaarayaan 28-ka bishan madaama United guul u baahan tahay si ay afarta sare kaga mid noqoto.
Qodobka 4-aad: Liverpool ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaartay Timo Werner waxayna xagaagan 43m oo pound kaga soo qaadanayaan RB Leipzig.
Qodobka 5-aad: Ronaldo ayaa markii ugu horeesay ku guul dareestay nus dhamaadka Champions League inuu soo gaari waayo tan iyo sanadii 2010.
Qodobka 6-aad: Tababare Javi Gracia ayaa soo galay liiska macalimiinta u sharaxan xagaagan tababare Sarri inay shaqada Chelsea ka badalaan.
Qodobka 7-aad: Franck Ribery ayaa kusii jeedo dalka Qatar wuxuuna xagaagan ku biirayaa naadiga Al Sadd madaama qandaraaskiisa Bayern gabo gabo yahay.
Qodobka 8-aad: Tababare Emery ayaa maamulka Arsenal u gudbiyay liis 10-cayaaryahan ku qoran yihiin oo uu qaarkood doonayo in xagaagan kooxda la keeno waxaana ka mid ah cayaartooydaas Keylor Navas, Christopher Nkunku, Ivan Perisic, Ever Banega, Pablo Fornals, Nicolas Pepe, Adrien Rabiot, James Rodriguez, Isco iyo Yannick Carrasco.
Qodobka 9-aad: Liverpool ayaa dul dhigtay £130m Sadio Mane oo Real Madrid xagaagan bartilmaameed xoogan ka dhiganeyso xidigan inay gacanta kusoo dhigaan.
Qodobka 10-aad: Philippe Coutinho ayaa sheegay inuusan ku fikirin ka tagista Barcelona sidoo kalena wuxuu xusay inay ku adag tahay ku laabashada EPL.
Qodobka 11-aad: Barcelona ayaa £100m ku baadi goobeyso Rashford oo United weerarka kaga cayaaro kadib markii Barca gabi ahaanba iska dhaaftay qorshihii ay kusoo qaadan laheyd Luka Jovic.
Qodobka 12-aad: Kulamada xiisaha badan ee caawo laga cayaarayo Champion-ka wareega 8-aad lugtiisa labaad waqtiga ay soo galayaan waa xiliga geeska Afrika:
10:00 pm Man City vs Tottenham
10:00 pm FC Porto vs Liverpool
Waxaa Aqrisay 216